कानुनीरुपमा विभाजन नहुँदा समस्या, अब छिनोफानो संसद्बाटै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेपछि राजनीतिकरुपमा विभाजित नेकपा कानुनीरुपमा विभाजन नहुँदा समस्या परेको छ । विस्तृतमा
रेशम चौधरीलाई जेलमै राखिरहने तागत कसैसँग छैनः राजेन्द्र महतो
स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि कांग्रेस नेता श्रेष्ठ अस्पताल भर्ना
जब प्रचण्डले छोरी रेणुलाई भनेः क्रान्तिका लागि विवाह पनि गर्न सक्दिनौँ ?
राप्रपा महाधिवेशनः प्रतिनिधिको निर्वाचन वैशाख १० भित्र सम्पन्न गर्ने
काठमाडौँ । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको भूमिगत समूहसँग वार्ता गर्न टोली गठन गरेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संघिय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले भारतीय मिडियासँग कुरा गर्दै नेपाल संकटबाट गुज्रिरहेको बताएका छन् । स्वास्थ्य परीक्षणको लागि भारतको नयाँदिल्लीमा रहेको बेला एसियन न्युज इन्टरनेसनल (एएनआई)सँग कुराकानी गर्दै डा. भट्टराईले नेपाल संकटबाट गुज्रिरहेको बताएका हुन् ।
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले रेशम चौधरीलाई जेलमै राखिरहने तागत कसैसँग नभएको बताएका छन् । मंगलबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता महतोले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
काठमाडौँ । स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि कांग्रेस नेता गाेपालमान श्रेष्ठ अस्पताल भर्ना भएका छन् । स्वासप्रश्वासमा समस्या आएपछि श्रेष्ठलाई आइतबार नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो ।
काठमाडौँ । जब रेणु दाहाल १८ वर्षकी मात्रै थिइन् । उनको पिता पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले फ्रेबअरी १९९६ मा नेपालको राजशाहीविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलनको बिगुल फुकेका थिए । उक्त समय प्रचण्ड करिब ४४ वर्षका थिए ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन आगामी वैशाख १० गतेभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्य व्यवस्था समितिको सोमबारको बैठकले वैशाख २५ देखि २८ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने महाधिवेशनलाई दृष्टिगत गर्दै उक्त निर्णय गरेको केन्द्रीय सचिवालय प्रमुख ध्रुवबहादुर प्रधानले जानकारी दिए ।
बाबुराम भट्टराई आज स्वदेश फर्कने
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघिय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई आज स्वदेश फर्कदै छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. भट्टराई न्युरो–इन्क्राइनको ट्युमरमा क्यान्सर भएको आशङ्कामा चिकित्सकको सल्लाहअनुसार परीक्षणका लागि भारतको नयाँ दिल्ली गएका थिए ।
शिलान्यास र उद्घाटनका लागि प्रम ओली झापा र मोरङ जाँदै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज झापा र मोरङ जाँदै छन् । काठमाडौंबाट पहिले उनी झापातर्फ जानेछन् । ओलीले बिर्तामोडमा बी एन्ड सी अस्पतालले बनाएको अत्याधुनिक पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसपछि ओली मोरङको उर्लाबारी जानेछन् ।